Mandinika Ny Lova Navelan’i Nelson Mandela Tao Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2014 0:32 GMT
Nelson Mandela 1918-2013. Sarintanan'i Bryant Arnold. Malalaka ny fampiasana azy.
Tamin'ny fiandohan'ny volana (desambra) no nodimandry ilay maherifon'ny fanoherana ny apartheid sady filohan'i Afrika Atsimo mainty hoditra voalohany, ka namela izao tontolo izao hisaona. Mahatsiaro ity olom-panjakana tiam-bahoaka ity amin'ny fombany manokana ihany koa ny vahoaka any amin'ny firenen'i Azia Atsimo.
Vao nahavita hatramin'ny farany ny fifidianana ny tao Nepal, taorian'ny korontana politika naharitra taona maro. Saingy mbola mampatahotra ny maro hatrany ny fomba fitarihan'ny mpitondra (ny fahaizan'ny mpitondra). Nanoratra ilay bilaogera mpanao satira an'eso Nepaley Guffadi :
Tao anatin'ny 60 taona farany isika nahita mpanao hatsikana an-jatony navela hanararaotra hitondra ity firenena ity. Saingy lasa nivadika ho mpaminany sandoka izay mampanankarena ny tenany sy ny fianakaviany daholo izy rehetra fa tsy nanampy ny olon-drehetra.
Hatramin'ny oviana isika no hiandry mpitondra [mpitarika] tsotra sy marina hitondra antsika any amin'ny Tany Nampanantenaina?
Mbola miandry hatrany ny Vaomieran'ny Fahamarinana sy ny Fampihavanana isika. Fa maninona moa no sarotra ho an'ny Amperorantsika sy ireo mpanompony ny miaiky ampahibemaso ny heloka bevava vitany ka mangataka famindram-po? Tokony hanao izany ihany koa ny mpitandro ny filaminantsika.
Asongadin'i Indra ny lahatsoratr’i Gopi Chandra Kharel tao amin'ny International Business Times, izay nanandrana nampifandrohy an'i Mandela amin'i Nepal, izay firenena 9.213 km avy ao Afrika Atsimo:
Mbola mila mianatra be dia be amin'ny mahaolompanjakana, ny fahadiovam-panaony ary ny tsy fananany nofinofy politika tiany ho tanteraka ho an'ny tenany ao amin'i Mandela ny mpitondra Nepaley. Ny fahafahany miara-miasa eny fa na dia amin'ireo mpifanandrina aminy aza dia efa famantarana ho antsika nandritra ny fotoana namolavolana ny lalampanorenana. – Jayaraj Acharya, Ambasaderan'i Nepal teo aloha teo anivon'ny Firenena Mikambana
Ny Bilaogera Passu avy any Bhutan nampitaha an'i Mandela tamin'i Zhabdrung Rinpoche, mpanangana ny fanjakana Bhotaney:
Niaina efajato taona talohan'i mandela i Zhabdrung nefa dia maro ny zavatra tena iraisan'ireo olona roa voatonona ireo- Zhabdrung nanambatra an'i Bhutan amin'ny maha-fanjakana azy raha nampiray ny foko samihafa nahatonga ny fananganana firenena iray matanjaka ao Afrika Atsimo i Mandela. Nandositra fisamborana tany Tibet izay noheverina ho nananany zo feno maha-mpitondra azy i Zhabdrung ka nankany Bhutan. Fa rehefa lasa matanjaka izy tany Bhutan dia tsy nitady valifaty na oviana na oviana tamin'ny mponin'i Tibet izay nandiso azy izy, tahaka an'i Mandela izay nihavana tamin'ny vahoaka izay nanagadra azy nandritra ny 27 taona.
Ankehitriny, raha nodimandry i Mandela dia nahatsiaro ny fahafatesan'i Zhabdrung aho
Avy any Sri Lanka i Asanga Welikala no nanoratra tao amin'ny Groundviews:
Ny fahafahana tsy manan-tahotra nanenika ny fitondra-tenan'i Nelson Mandela sy ny fandresen-dahatrany ara-politika nandritra ny fiainany, ary ny fahaizany mitarika nananany no nahafahany niantoka [nanangana] ny demokrasian'ny lalampanorenana manaja ny fijoroan'ny antoko maro sy andraisan'ny rehetra anjara. Indrisy anefa fa tsy ohatra ho an'ny mpitondra Afrikana sy Aziatika izay manana fahafahana, hery, toetra hanarahana izany.
Ao amin'ny Groundviews ihany i Sunanda Deshapriya nandrafitra taratasy misokatra noforonin'ny saina fotsiny lazaina fa nalefan'i Mandela ho an'ny Filoha Sri Lankey Mahinda Rajapakse amin'izay antenainy avy amin'ny filoha:
Indraindray aho manontany tena amin'izay nianaranao avy aminay rehefa lasa mpiaro fatratra sy namana akaikin'i Mugabe filohan'i Zimbabwe ianao, izay nanondro ny tenany ho filoha mandra-pahafatiny, raha jerena amin'ny ataony. Tena hafa tanteraka amin'izay alehanay ny lalany ary feno herisetra. Ny vaovao hafa mandiso fanantenana indray ny fifandraisanao akaiky amin'ny mpanjakan'i Swaziland, iray amin'ny firenena tratra aoriana indrindra eto Afrika. Raha nisafidy ny hanaraka ny lalan'i Zimbabwe sy Swaziland ianao dia tsy misy na inona azonay atolotra ho anao
Teeth Maestro avy any Pakistan nieritreritra fa tsy maro ny mpitarika no mitrandraka ny fandriampahelamana manoloana ny fisaritahana:
Mahagaga fa tahaka ny anondroan'ny olon'ny elatra havanana an'i Mandela ho Ilay Mpampihorohoro Mandela, Khan dia lokoin'ny mpanohitra azy amin'ny ankapobeny ho Taliban Khan, izay avy amin'ny elatra havia ny ankamaroany. Araka ny fihevitro, izany fijoroana izany dia setriny avy amin'ireo mpifanandrina aminy izay mahita ny fiezahana hisian'ny “fifampiresahana ho amin'ny fandriampahalemana” ho fitadiavana handravana ny finiavan-dry zareo hifehy an'i Pakistan. Tsy hahasakana ny tena mpitarika mihitsy ny fiantsoana ireny karazan'anarana ireny, raha ny marina, fa eo anatrehan'ny fifanandrinana no tena iezahan-dry zareo manohy ny tolona mafy kokoa ho amin'ny tsara indrindra hoan'ny tanindrazany – Ny Fandriampahalemana.
Tamin'ny 1990 ny governemanta Indiana no nanolotra mariboninahitra ambony indrindra fanome ny sivily, ny Bharat Ratna (Vatosoan'i India). Tamin'ny fahafatesany dia nanambara ny androm-pisaonana dimy andro manerana ny firenena ho an'i Mandela i India. Hajain'ny maro tokoa izy eto amin'ny firenena, saingy toa mbola misy tsy nahita ny sariny hatrizay niainany ny sasany. Nisioka ny poety, bilaogera sy mpitsikera an'eso Farrukh Hossaini:
Ity afisy lehibe ao Tamil Nadu #India ity dia manome voninahitra an'i Morgan Freeman fa tsy #NelsonMandela